Uqaqambisa njani isicatshulwa kwiPDF ekhuselweyo | Abadali be-Intanethi
Uqaqambisa njani isicatshulwa kwiPDF ekhuselweyo
Ukuba ungomnye wabo bafunda kwi-Intanethi, uyazi ukuba enye yezixhobo onazo ziiPDF. Nangona kunjalo, ootitshala abaninzi badla ngokuwakhusela amaxwebhu abo ukuze iitekisi zabo zingakhutshelwa okanye zibiwe. Kwaye loo nto ibangela ukuba ingabinako ukukrwelelwa umgca ngaphantsi ngaphandle kokuba uyiprinte. Okanye ngaba kunokwenzeka? Us siyayazi indlela yokuqaqambisa isicatshulwa kwiPDF ekhuselweyo.
Kwaye njengoko sifuna ukuba uyazi nawe, kwaye unezixhobo ezifanelekileyo zokusebenza kunye nabo, siza kuthetha malunga nezisombululo ezinokuthi uzifezekise. Ziphose kuyo?
1 Kutheni iPDF ikhuselwe?
2 Kutheni ugxininisa isicatshulwa kwiPDF
3 Uqaqambisa njani isicatshulwa kwi-pdf ekhuselweyo
3.1 Adobe Acrobat
3.2 Izixhobo ezikwi-Intanethi
3.3 Ukusuka kwiPDF ekhuselweyo ukuya kwiPDF ehlelekayo
Kutheni iPDF ikhuselwe?
Khawufane ucinge ukuba wenze isicatshulwa esibalulekileyo, esitsha, esiyilayo okanye uxwebhu. Kwaye ingxaki kukuba kufuneka uyithumele kubantu abaninzi, nokuba bakwisimo sakho esifanayo (ooprofesa, abaphandi ...) okanye eyahlukileyo (abaphathi, abafundi ...). Into yokugqibela oyifunayo kukuba izimvo zakho zikhutshelwe. Kwaye, ukuba bayakwenza, makungabi njalo ngokoqobo.
Ezininzi kakhulu bagqiba kwelokuba bazithumele ngokhuseleko lokuthintela abantu ekukopeni. Ke awufumani misebenzi ngeetekisi zakho okanye nantoni na enjalo.
Ngokwenyani, ukukhuselwa kwePDF yinto elungileyo, kodwa ayikukhululi nakwezi ngxaki, kuba kukho izixhobo ezinokudlula ukuthintela, kwaye ke ufumane uxwebhu oluhleleke ngokupheleleyo. Kodwa kuyinyaniso ukuba inika ukhuseleko oluncinane kwabo basebenza nabo.
Kutheni ugxininisa isicatshulwa kwiPDF
Isizathu sokuba ufuna ukubalaselisa izicatshulwa zahlukile. Kungenzeka ukuba ulibele ukuqaqambisa inxalenye yoxwebhu kwaye awunayo imvelaphi, okanye inkqubo oyenze ngayo, ikufuphi.
Okanye kusenokwenzeka ukuba ungumfundi yaye ufuna ukubalaselisa iinxalenye zamanqaku oza kufundisisa.
Ngolunye uhlobo, ukuqaqambisa, okanye ukukrwelela, kusetyenziselwa ukuqaqambisa inxalenye yoxwebhu. Sisenokuthi kungenxa yokushwankathela, ekubeni usalatha ezona nxalenye zibalulekileyo okanye ezo omele uzikhumbule kakuhle.
Ukwenza oku, amaxwebhu amaninzi, afana ne-doc, i-docx, i-txt... akuvumela ukuba uyenze ngokulula. NakwiPDF ehlelwayo. Kodwa kuthekani ngokhuselo?
Nangona kufuna umgudu ongakumbi wokuyifeza, kunokwenziwa. Kwaye sichaza indlela engezantsi.
Uqaqambisa njani isicatshulwa kwi-pdf ekhuselweyo
Ukuze ukwazi ukuqaqambisa isicatshulwa kwiPDF ekhuselweyo, into yokuqala ekufuneka uyigcine engqondweni kukuba kufuneka ungayikhuseli., oko kukuthi, kufuneka ibe yiPDF ehlelekeka ngokupheleleyo ukuze ukwazi ukusebenza ngayo.
Ufezekisa oku ngeendlela ezininzi, kodwa phantse kuzo zonke kuya kubandakanya ukusebenzisa isixhobo esithile.
I-Adobe Acrobat yinkqubo “esemthethweni” yePDF kwaye yeyona iya kukuvumela ukuba uhlele iifayile zePDF ngokulula nangokukhawuleza.
Kufuneka uthathele ingqalelo ukuba, ngokwesiqhelo, ukuba awunguye umbhali okanye umenzi woxwebhu, akufuneki ube nakho ukulihlela, kodwa kuya kufuneka uqhagamshelane naloo mntu ukuze uyifumane.
Kwakhona, iPDF ekhuselweyo inokukhuselwa ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo:
Ngegama lokugqitha, elinokususwa. Njani? Yiya kwiZixhobo/Khusela/Ufihlo/Susa ukhuseleko. Kwiimeko ezininzi izakucela igama lokugqitha obunalo ukuze uyisuse.
Kumgaqo-nkqubo wokhuseleko osekelwe kwiseva, apho umbhali ngokwakhe, okanye umlawuli weseva, ngubani onokuyitshintsha.
Ngaphambi kokukunika imizekelo yamaphepha e-intanethi akunceda uvule iiPDF, kufuneka senze iingcaciso ezimbini:
Kwelinye icala, ukuba Sithetha ngesixhobo somntu wesithathu, nto leyo ethetha ukuba uya kulayisha olo xwebhu kumncedisi ongasayiphathiyo.. Ukuba ibaluleke kakhulu, asiyicebisi (kwaye kungcono ukuzama ngezixhobo ozifaka kwikhompyuter yakho). Ngoba? Ewe, kuba awuyazi into enokwenzeka kolo xwebhu. Ngaphandle kokuba uyalithemba iphepha, kwaye uyazi ukuba bayalicima xa uyeka ukusebenza nalo, akufanele uyenze.
Ngakolunye uhlangothi, izixhobo azisoloko zilawula ukuvula uxwebhu. Ngamanye amaxesha bayakwenza kwaye ngamanye amaxesha abakwenzi. Kwaye nokuba benza njalo, banokuphela bengaphawuli isicatshulwa, ngoko yigcine engqondweni.
Sele sikuthethile konke oku, ezinye zezixhobo esinokucebisa ngazo zezi:
Phantse zonke zisebenza ngendlela efanayo: kufuneka ulayishe uxwebhu, ngenisa igama eligqithisiweyo (kwamanye amaphepha) kwaye ulinde ifayile ehlelekayo ukuba ibuyiswe. Abanye abafuni ukuba usebenzise igama eligqithisiweyo, bazama ukuyivula ngaphandle kwayo (ngaphandle kokuba iguqulelwe ngokuntsonkothileyo).
Ukusuka kwiPDF ekhuselweyo ukuya kwiPDF ehlelekayo
Nje ukuba ube nayo ingakhuselekanga, inyathelo elilandelayo iyakuba kukuyihlela. Kwaye ngenxa yoku unokhetho (kuba awuzukuhlala ukwazi ukuhlela iPDF ngenkqubo). Umzekelo:
Umda. Ukuba uyasebenzisa Windows 10 okanye i-11 lukhetho. Kuya kufuneka uvule i-pdf ngesikhangeli kwaye ukhethe isicatshulwa oza kuqaqambisa. Nje ukuba uyenzile, imenyu esezantsi iya kuvela eza kukuvumela ukuba ukrwelele umgca ngaphantsi ngemibala.
Adobe Acrobat. Kuya kuba yinkqubo engcono kakhulu yokutshintsha okubhaliweyo, ukukrwela umgca, ukubeka imifanekiso ... ngamanye amagama, ukuhlela yonke i-pdf. Ukwenza oku, kufuneka uvule ifayile kwi-Acrobat DC, ucofe "Hlela iPDF" isixhobo kwiphaneli elungileyo kwaye usebenzise izixhobo onazo. Nje ukuba ugqibile, uyayigcina kwaye yiloo nto.
ApowerPDF. Sisoftware efakwe kwikhompyuter kwaye iguqula iitekisi, imifanekiso, iiwatermark, kwaye unokutshintsha nolandelelwano lwamaphepha. Ewe kunjalo, inguqulelo yasimahla ilinganiselwe kakhulu kwaye ukuba ufuna ukwenza uninzi lokuhlela kuya kufuneka uye kulowo uhlawulweyo.
LibreOffice. Ngumhleli woxwebhu (igama, ukugqwesa...) kodwa unokuhlela iiPDF. Uninzi lwazo luyazivula kwaye zikuvumela ukuba uhlele ngokungathi usebenza ne-doc.
PDF2go. Ukuba awufuni ukufaka nantoni na kwikhompyuter yakho, lo ngumhleli wePDF okwi-intanethi apho unokugqamisa ngokulula umbhalo. Ukwanazo nezinye iindlela.
Foxit PDF Reader & Editor. Kulungile ukuba into oyifunayo kukuqaqambisa isicatshulwa kwiPDF kodwa kwiselfowuni yakho. Yenzelwe iOS kuphela kodwa eyona ilungileyo ikhona. Inenkxaso kwiilwimi ezininzi kwaye isimahla.
Umfundi wePDF kunye nomhleli. Inketho ye-Android (nangona ikwi-iOS). Ke, krwela umgca ngaphantsi, hlela, sayina...
Kukho iindlela ezininzi onokukhetha kuzo kodwa ngezi uya kube sele ukwazi ukuqaqambisa isicatshulwa kwiPDF ekhuselweyo. Ingaba unawo amanye amacebiso? Sivuliwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Uqaqambisa njani isicatshulwa kwiPDF ekhuselweyo
Iinkqubo zokuguqula imifanekiso ibe yimizobo